Translate Somali to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Somali to Myanmar (Burmese), Somali to Myanmar (Burmese) translations, Somali to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Hello, sidee ayaad tahay မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Ma jiraa qof မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Waan ku jeclahay dhab ahaantii ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Waa imisa qiimaha hamburgerkani? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Ma i soo wici kartaa taksi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
waan ka xumahay ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Iga dhaaf တဆိတ်လောက်
Waan xiiseynayaa ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Duulimadayda ayaa dib loo dhigay အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Waxaan halkan u ahay ganacsi ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Hello, magacaygu waa မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Waan ka xumahay, laakiin waan guursaday ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Miyaad i geeyn kartaa garoonka? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Maxay tahay waqtiga hadda, fadlan? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Halkee ayaa saldhigga booliska kuugu dhow? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Miyaan kaa amaahan karaa telefoonkaaga telefoonka? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Ma i caawin kartaa? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Ii cabi cabitaan, fadlan ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Immisa ayey ku kacaysaa? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Waxaan xasaasiyad ku leeyahay gluten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Wac dhakhtar ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Ma jiraa dhakhtar? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Ma wici karaa wicitaan? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Waxaad iigu wacdaa sarkaalkaaga fadlan. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Meeshan waa mid aad u fiican ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Ii qaado hotelka fadlan fadlan ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Waa maxay lambarka qolka? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?